Ngokuqinisekile wonke umuntu uyazi kubuhlungu kanjani bee inezindosi, lapho kuthiwa ukuvuvukala kanye ububomvu, futhi okwamanje lapho isinambuzane ezinamaphiko lihlaba isikhumba udosi walo onoshevu kungabangela uyozisola. Izilwane ezincane zingase zife kusuka lokhu kuhlasela izenzo nesihlungu sezilwane. Futhi uma kukhona uhlobo umuntu akesabi bee bokuntinyelwa?
Kungakhathaliseki isilwane ukuhlenga usayizi
Kubonakala sengathi awuboni kuhlasela alezi zilwanyana kungenzeka izilwane esikhulu kakhulu, ezifana nezindlovu. Nokho, ososayensi baye washo la mazwi ukuthi lezi zidlakela kukhona esaba kakhulu lezinyosi futhi cha sondelana lo zomtholo, lapho izidalwa ezinamaphiko zinambuzane zakha ezidlekeni zazo. Futhi kokuba kwabacasula, izindlovu ukuphila ukukhumbula indawo kwenzeka lapho, futhi kungaba ukuxwayisa izihlobo izingozi ezingaba khona. Kodwa yini isilwane akesabi bee bokuntinyelwa ngempela, kungcono nebhere.
Bears ezibhekwa izilwane omnivorous, banayo injabulo efanayo ungadla izithelo, amantongomane, izimpande, izinambuzane, inhlanzi, namagundane nezinyoni. Uma ukudla kancane, abahlukumezi kudla emacembe kanye emagxolweni izihlahla. Kodwa uswidi enkulu lezi zilwane ezinamandla kuyinto uju. Him they ukuhogela iphunga, ngoba kungasenza ukugibela esihlahleni lapho izinyosi isidleke itholakala. ngezidladla Inamandla nge izimpiko abukhali esidla inyama walichitha isifuba adle hhayi kuphela uju elimnandi, kodwa futhi cell, futhi bee izibungu. Futhi uma bear wathola yezinyosi, bese kahle Ukubuyiselwa emuva ke zokusuthisa amnandi izinyo nogqozi. Ngemva kwakuwukuhlasela enjalo yomnikazi kwezidleke zezinyosi ngeke abakwethembi lokho isilwane akesabi bee bokuntinyelwa. Impi on onoboya izinyo elimnandi kwenza abanikazi bee amapulazi emhlabeni kwezidleke zezinyosi ukudonsa izintambo kagesi bese fafaza isifuba lithium chloride, elibangela umhlaseli reflex Gag.
Izinyosi, yebo, nazo zivikelwe futhi ukuhlasela ibhere, uzama bite him, kodwa uboya isilwane obukhulu ivikela ke. Esintinyelayo izinyosi apharathasi siqukethe nje kuphela ukuthi sting, kodwa futhi ngenxa nezindlala ezinesihlungu secrete izinto ezibangela ubuhlungu obukhulu phakathi Ukungena esilondeni. Nokho, okuqinile amafutha ungqimba okuyinto uthela buthelela ngaphansi kwesikhumba, ungaphuthelwa ubuthi emzimbeni. Ukuze buthelela amabhere amafutha udle usuku amakhilogremu amane ukudla. Kodwa lezi isilwane esinamandla invulnerable has "Achilles esithendeni" yayo, ngenxa lapho ephendula umbuzo yini isilwane akesabi bee inezindosi, ukuwa akuzona beqiniseka. ekhaleni Ngokucophelela uthela kakhulu sensitive bee ukuhlaselwa.
Clitocybe Nuda: mushroom ezidliwayo futhi enobuthi?
Yini ukupheka ingulube izimbambo ezisukela enkulungwaneni yesibili?
Indlela ukulungiselela mackerel usawoti ekhaya. Usawoti mackerel: okungcono zokupheka
Static futhi ashukumisayo IP-ikheli